Ezi mmekọrịta kwesịrị ka echere gị. - Amaghi - Quedia Pedia
Ezi mmekọrịta kwesịrị ka echere gị. - Amaghi
Ọfọn, ịhụnanya bụ ihe anyị na-achọsi ike mgbe niile. Bekpachara anya, ọ bụ ihe kacha mkpa na ndụ anyị. Ọ bụrụ n’inweghị ịhụnanya na ndụ gị, enweghị isi na ibi ndụ. Yabụ, gbaa mbọ gbasaa ịhụnanya. Na nzaghachi, ị ga-ahụkwa onwe gị n'anya.
N’otu aka ahu, ihunanya bu ihe anyi n’acho mgbe nile ibanye na mmekorita ihunanya. N'ikpeazụ, mgbe anyị nwetara ịhụnanya anyị, anyị na-enwe obi ụtọ na afọ ojuju. Ma mgbe ụfọdụ, mmekọrịta anyị anaghị arụ ọrụ nke ọma.
Maka nke ahụ, anyị ga-aga ọtụtụ usoro achọghị. Isi ihe kpatara nsogbu ndị ahụ bụ enweghị nkwukọrịta na nghọta.
Yabụ, ihe kachasị mma ị nwere ike ime bụ ịghara ọsọ ọsọ maka mmekọrịta. Mgbe oge ahụ ruru, ị ga -enwe mmekọ nke ndụ gị. You ga-amararịrị na ichere kwesịrị ka ọ bụrụ na ị na-enweta ezi mmekọ.
Ọ baghị uru ogologo oge ị ga-echere. Ihe niile ị ga - amata na ichere onye gị na ịchọrọ ịlụ bụ ihe kachasị mma ị nwere ike ịme. You gaghịkwa enwe obi mgbawa na onye gị na ya ga-enweta.
Nsogbu Mmekọrịta Quotes
Ezigbo Mmekọrịta Quotes
Kwuru okwu banyere nsogbu mmekọrịta
Ezi mmekọrịta mmekọrịta Quotes
Mmekọrịta na-ekwu okwu
Mmekọrịta Kwuru na Ihe Onwunwe
Short Short Okwu
Ike mmekọrịta Quotes
Mmekọrịta Siri Ike Kwuru Okwu
Agbachikwala onwe gi nkasi obi maka ndi ozo. - Amaghi
E nwere oge ụfọdụ anyị na-ala azụ ịmalite olu anyị nanị n'ihi nkasi obi nke ndị ọzọ. Agbanyeghị,…
Enwere m afọ ojuju maka nwanyị m bụ taa n'ihi na agabigala m na hel nke oge ịghọ ya. - Amaghi
Kwesịrị inwe nganga nke nwanyị ị bụ taa n'ihi na ị ga-eche ihu ọtụtụ…
Egbagharala oge ọbụla maka ole ịchọrọ inye. Naanị nwee mwute maka ndị achọghị ihe ọ bụla. - Amaghi
I ghaghi igbala ngbaghara maka ihunanya i ghaghi inye ndi ozo. Na-echeta mgbe niile…
Ikwere na onwe gị bụ ihe nzuzo mbụ nke ịga nke ọma. - Amaghi
Ọtụtụ oge, ihe dị iche na ị nweela ọganiihu na ndụ gị ma ọ bụ na agbadaghị…